ရေးလိုက်ကြစို့သူငယ်ချင်း - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on August 18, 2012 at 13:19 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
တစ်ခါတုန်းက စာရေးသားဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုအက်ဆေးလေးရေးခဲ့ပါသေးတယ်။ စာရေးသားခြင်းဟာ လူမျိုးတစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်။ လူသားမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံး အခုလောက်တိုးတက်လာတာဟာ ရှေ့ကလူသားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ အတွေးအကြံတွေကို စာပေရေးသားချန်ထားရစ်ခဲ့လို့နှောင်းလူတွေက အသုံးချနိုင်တာတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်စစ်သားမင်းကြီးသာ ဒီလိုကျောက်စာမျိုးမရေးထိုးခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့ ပုဂံခေတ်က အခြေအနေတွေ၊ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဒီနေ့ဒီလိုဘယ်ပြန်ပြောနေနိုင်ပါ့မလဲ။
` ငါ၏ ယာလက်ဖြင့် ဆန်စပါးရိက္ခာ ကိုပေးအံ့၊ ငါ၏၀ဲလက်ဖြင့် ၀တ်စား တန်ဆာ ပေးအံ့။
မကြာခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်အရေးအခင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အင်္ဂလိပ်လိုသတင်းရေးသားတင်ဆက်နိုင်မှုအားနည်းတော့ နိုင်ငံတကာမှာ သူများတွေလိမ်ပြောသမျှ ကိုယ်ကလူဆိုးဖြစ်ရတော့တာပေါ့။ ဒါကိုသဘောပေါက်လာလို့ နာမည်ကြီးဂျာနယ်နှစ်စောင်လောက်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးလာကြပါပြီ။ ဒါကဥပမာပါ။ စာပေရေးသားခြင်းနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးအပေါ်ထောက်ပံ့နိုင်ပုံပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာလိုလည်းရေးကြပါ။ အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးကြပါ။
အင်္ဂလိပ်လိုရေးနိုင်ခြင်းကတော့ ကိုယ့်ဘ၀တိုးတက်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပြန်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဘ၀မှာ essay လိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေရေးရတဲ့အပြင် thesis, dissertation လိုကျမ်းတွေခန့်ခန့်ငြားငြားရေးရတာလဲ မလွဲမသွေကြုံရမှာပါ။ အလုပ်ထဲရောက်ပြန်တော့ အများစုက ၀န်ထမ်းဘ၀မှာပဲကျင်လည်ရမှာဖြစ်တော့ အထက်ဌာနတွေကို report တွေရေးတင်ရဦးမှာပါ။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ကိုယ်တိုင်ဟန်ကျပန်ကျရေးနိုင်မှ ကိုယ်လိုရာရောက်အောင်တင်ပြနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားဘ၀ကလို စာအုပ်ထဲကကူးချတာတွေ သူများကို ရှဲဒိုးရေးခိုင်းတာမျိုးတွေနဲ့တော့ရေရှည်မှာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါမှာ မြန်မာလိုစဉ်းစားပြီး အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန် ရေးတဲ့နည်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုတွေးပြီးတစ်ခါတည်းချရေးတဲ့နည်းဆိုပြီးနှစ်မျိုးယျေဘုယပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒုတိယနည်းကတော့
မှန်ကန်သင့်လျော်တဲ့နည်းလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လေ့လာနေဆဲအခြေခံအဆင့်ကျောင်းသားတွေအတွက်
ဒီနည်းလမ်းကခက်ကောင်းခက်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခါ စာရေးသူတွေမှာ ဦးနှောက်နဲ့ရေးတာနဲ့
နှလုံးသားနဲ့ရေးတာလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ရေးတာက အချက်အလက်တွေ၊ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်တင်ပြရတာဖြစ်လို့နည်းနည်းပင်ပန်းတတ်ပါတယ်။ နှလုံးသားနဲ့ရေးတဲ့စာကတော့ ကိုယ့်ခံစားချက်ကလေးတစ်ခုကနေ ဈာန်ဝင်ရေးရတာဆိုတော့ ရေးလိုက်တဲ့စာလုံးတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုကရှိနေပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ့်နေ့စဉ်ဘ၀ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ဦးနှောက်ကိစ္စကောနှလုံးသားကိစ္စပါ
တစ်ချို့က ကျွန်တော်တို့မှအင်္ဂလိပ်စာမတတ်သေးတာ။ ဘယ်လိုရေးရမှာလဲ ဟု မေးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်
ဘယ်လောက်အထိတတ်မှ အင်္ဂလိပ်လိုရေးကြတော့မှာလဲ။ ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်မျိုးချစ်တို့ ဆရာကြီးတက်တိုး တို့လိုအဆင့်မျိုးရောက်မှရေးရမှာလား။ သူ့အထွာနှင့်သူစရပါမည်။ မိမိလက်ရှိအဆင့်ကနေစရေးနိုင်ပါသည်။ အဓိကက ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုသတ်မှတ်ထားဖို့ပင်ဖြစ်သည်။ (၁) မိမိစာရေးသားစွမ်းရည်တိုးတက်လာဖို့။ (၂) မိမိ၏အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်လာဖို့။ (၃) အတွေ့အကြုံဖလှယ်ဖို့ စသည်လိုရည်မှန်းပြီးရေးလျှင်တော့ မိုးကောင်းကင်ကို ဒူးနှင့်တိုက်စရာမလိုတော့ပါ။ ရေးပါများလာတဲ့အခါတစထက်တစ်စလွယ်လာပါလိမ့်မယ်။
စာရေးရာမှာ Phrase, sentence level ကနေ paragraph level ဆီကိုတစ်ဆင့်ခြင်းလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။ အရင်ခေတ်တုန်းက စာရေးချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာဒိုင်ယာရီထဲရေး သူငယ်ချင်းတွေလိုက်ပြ၊ ဒါမမဟုတ် မဂ္ဂဇင်းစာစောင်တွေဆီပို့ချင်ပို့ ဒီလောက်ပဲတတ်နိုင်ခဲ့သည်။ အခု social media ခေတ်မှာကျတော့ ကိုယ်ပိုင် blog တစ်ခုဖွင့်ပြီးရေးချင်တာရေးလို့ရသည်။ Gtalk ကနေချက်လို့ရသည်။ forum တွေ facebook တွေ မှာရေးလို့ရသည်။ comment တွေပေးလို့ရသည်။ အများကြီးမတတ်သေးတဲ့သူက သူငယ်ချင်းဓါတ်ပုံလှလှလေးကို wow! It's great. တို့ It's lovely တို့ကနေစရေးနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးလို issue မျိုးတွေမှာ ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုရေးနိုင်ပါသည်။
ဒါတွေဟာစာရေးလေ့ကျင့်လို့အကောင်းဆုံးနေရာတွေပဲပေါ့။ ဒီလိုရေးတော့ ကိုယ့်အရေးအသားကို ပြင်ပေးသွား တဲ့လူရှိနိုင်သည်။ ဆဲသွားသည့်လူလဲရှိနိုင်သည်။ ဒါတွေကအရေးမကြီး။ ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်က အပေါ်က ၁-၂-၃ ကိုမျက်ချေမပြတ်ဖို့ပဲဖြစ်သည်။
phrase လေးတွေ sentence လေးတွေသူများတွေရေးထားတာတွေ့ပါများတော့ကိုယ်လည်းသိလာမည်။
ကိုယ်လိုက်ရေးပါများတော့ sentence level ပိုင်လာမည်။ ဒီထက်တစ်ဆင့်မြင့်ချင်ရင် transition တွေသုံးတတ်အောင်လေ့လာပြီး ၀ါကျတစ်ကြောင်းနှင့်တစ်ကြောင်း၊ စာပိုဒ်
လေ့လာသည်ဆိုရာ၌တကူးတကအချိန်ပေးစရာမလိုဘဲ သူများတွေရေးထားတာ များများဖတ်လာလေ
သဘောပေါက်လာလေလေဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့လက်ရာတွေကို များများဖတ်နိုင်သမျှဖတ်ပါ။ သူ့အရေးအသားဟန် ဟာကိုယ့်ခေါင်းထဲစွဲလာပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက အင်တာနက်ပေါ်က comment တွေ စာတွေဟာစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအသားမဟုတ်တာတွေ၊ စာလုံးပေါင်းတွေကအစတစ်လွဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုတော့ကိုယ်က dictionary တစ်ခုနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ရပါမယ်။
အင်တာနက်မှာစာရေးကြတဲ့အခါ လူအများက ဖြစ်သလိုပဲရေးကြပါတယ်။ စာလုံးကြီးရမယ့်နေရာမှာမကြီး၊
အတိုမချုံ့ရမယ့်နေရာတွေမှာအတိုကောက်တွေရေးနဲ့။ တကယ်တော့ အတိုကောက်စာလုံးတွေ ဆိုတာ hand phone တွေရဲ့ SMS ပေးပို့တာကနေဖြစ်လာတာပါ။ တယ်လီဖုန်းမှာတော့ ခလုပ်လေးတွေကသေးတယ်။ ၁ ကနေ ၉ အပါအ၀င်စုစုပေါင်း ခလုပ် ၁၂ ပဲပါလေ့ရှိတယ်။ ခလုပ်တစ်ခုမှာ အက္ခရာ ၄ခုလောက်ထည့်ထားတော့ စာရိုက်ရတာ အရှည်ကြီးရိုက်လို့မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် အတိုကောက်တွေ BRB, တို့ LOL တို့သုံးရတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကွန်ပျူတာနဲ့စာရိုက်မယ်ဆိုရင် standard keyboard ရှိနေတော့ အဲဒီလိုချုံ့ရိုက်စရာမလိုပါဘူး။ လက်ရေးနဲ့ရေးတာထက်တောင်ကွန်ပျူတာကမြန်နေတော့ အပြည့်အစုံရိုက်ရမှာဝန်မလေးသင့်ပါဘူး။ ကိုယ့်စာကိုဖတ်တဲ့သူကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ အနည်းဆုံး စာလုံးပေါင်း၊ သဒ္ဒါ အထားအသိုမှန်အောင် အားထုတ်သင့်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ကတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကူညီကြပါ။ သူမသိတာကိုရှင်းပြလိုက်လို့ ကိုယ့်မှာလျော့မသွားတဲ့အပြင်
ကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေတက်လာပါလိမ့်မယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းလည်းတိုးပွားလာပါလိမ့်မယ်။ comment တွေ discussion တွေမှာ အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားဆွေးနွေးပါ။ Do something in English. Write something in English everyday. လုပ်ရင် တစ်နေ့နေ့မှာ အင်္ဂလိပ်လိုအဆင့်အတန်းရှိရှိရေးသားနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Permalink Reply by zaw phyo naing on August 18, 2012 at 22:28
Permalink Reply by Nayri-Lin on August 19, 2012 at 11:07
when I read your post, I get new idea for my paper.
Permalink Reply by Mya Lwin Lwin Aung on August 19, 2012 at 12:07
Thank you very much, sayar Zarni
your messages are very useful to us
Permalink Reply by zowntann on August 19, 2012 at 14:18
I never forget that. I trying like it. It is good ways. I installed it's about in my heart.Thank u teacher with bigly bigly.
Permalink Reply by 0tsrao8ls4p2j on August 20, 2012 at 1:06
Permalink Reply by Thandar ko on August 20, 2012 at 11:31
Permalink Reply by Moe Sandar on August 20, 2012 at 11:33
Permalink Reply by 0bfclm9dp2l33 on August 20, 2012 at 11:59
thank ,so much .................very .respect.
Permalink Reply by zephyr1 on August 20, 2012 at 11:51
Thanks for your post.Your post is very helpful for me.
Please write more post for the beginners like me.
Thank you sayar :)
Permalink Reply by Kyaw Thet Htoo on August 20, 2012 at 12:20
Permalink Reply by Angry Angel on August 20, 2012 at 12:25
Al Right, I have to try according to your advice.Thanksalot.I have decided to write in English.
Permalink Reply by Angry Angel on August 20, 2012 at 12:29
As your advice, I have decided to write in English. Thanksamillion.